Mabhuku akanakisa gumi naGabriel García Márquez | Zvazvino Zvinyorwa
Kunyangwe paine makore anopfuura matatu apfuura kubva pakufa kwake, nyika haina kukanganwa nezvaGabo ... uye haichazoiti. Pakutanga kubva kuAracataca, Colombia, iro taundi rakahwanda pasi pekuzivikanwa kwevakakurumbira Macondo kubva kuMamwe Makore Makore eUgaGabriel García Márquez (Kurume 6, 1927) ndiye atove munyori mukurusa akaburitswa neSpanish American mabhuku. Izvi 10 akanakisa emahara emabhuku aGabriel García Márquez simbisa mashiripiti ebasa reiyo baba vezvamashiripiti uye kukunda weNobeIye uyo akatinyengedza nekwanisiro yake yekutsanangura kondinendi mubhuku, sanganisa chokwadi nefungidziro uye shandura dzimwe dzenyaya dzayo kuti dzive dzisina nguva.
1 Makore zana okusurukirwa
2 Rudo Munguva YeKirarera
3 Chronicle Yerufu Rwakafanotaurwa
4 Colonel haana wekumunyorera
6 Nyaya yekurasa
7 Mumatsutso a Patriarch
8 Ndangariro dzehure hwangu hunosuruvarisa
9 Gumi nembiri Pilgrim Tales
10 Rarama kuti utaure
Yakagamuchirwa naGabo mune imwe yenguva dzakaipisisa dzehupfumi, munyori aisakwanisa kuona kuti basa rake, mushure mekutumirwa kumushambadzi weArgentina Sudamericana muna 1967, raizove budiriro isingarambike. Nyaya yemhuri yaBuendía, anogara mutaundi rakarasika reMacondo, haana kungoshandira kurondedzera nhoroondo yeLatin America pamazera akati wandei, asi kugadzira mari yechiratidzo chemashiripiti chakakunda mukati memakore makumi matanhatu nemakumi manomwe kuti ive chiratidzo chetsamba dzeIbero -American tsamba. Pamabhuku gumi akanakisa naGabriel García Márquez iyi ndiyo magnum opus yake, pasina kupokana.
Rudo munguva ...
Pane kanopfuura kamwe chiitiko, Gabo akabvuma izvozvo Rudo munguva yekorera ndirwo rwaaifarira. Chimwe chezvikonzero chiri munhau yevabereki vemunyori seyakakurudzira kudanana kwaFermina Daza, akaroorwa nachiremba Juvenal Urbino, uye akasurukirwa Florentino Ariza mudhorobha rechiteshi muColombian Caribbean. Yakagadziridzwa muhupenyu hwese hwevatatu protagonists, Rudo muNguva dzeCholero rakafanana neinononoka bolero, iyo inokunyudza iwe mune pfungwa dzevanyori kune iyo nguva ndiyo chete tariro. Yakabudiswa muna 1985, iyo novel yaive yakabudirira uye (un) yaifanirwa neyekugadziriswa kwefirimu kunoitwa muna 2007.
Chronicle yerufu ...
Kubva pane peji rekutanga watoziva magumo, asi hoko ndeye kuziva kuti zvidimbu zvechirahwe zvakatungamira kurufu rwaSantiago Nasar zvinokwana pamwe chete, achipomerwa naAngela Vicario, achangoroora kuna chiremba Bayardo San Román, wekuve chikonzero chekurasikirwa nehumhandara hwake. Iyo nyaya yematsotsi yaizivikanwa nemunhu wese asi hapana akambomira kumira iri padyo nenhau yeutikitivha uye inogamuchira akasiyana mafambiro kubva kunezve mutapi venhau Gabo. Rakadhindwa muna 1981, Chronicle of a Death Foretold Iyo yakafuridzirwa nenyaya chaiyo yemurume akapondwa mutaundi reColombia muna 1951.
Colonel haana mumwe ...
Rechipiri rakaburitswa naGarcía Márquez raive iri pfupi bhuku iro, kunyangwe nehurefu hwaro, raive nenyaya yakasimba seyakange isinganzwisisike. Iye protagonist, colonel uyo anoenda kuchiteshi mangwanani ega ega akamirira mari yake yepenjeni kumabasa ake muHondo Yezviuru, anofamba nemigwagwa yeguta reColombia, anobata nemukadzi wake uye anoedza kudyisa jongwe remufi wake achirwa. pakati pehurombo huri kukura. Iyo novel yakaburitswa muna 1961 uye Gabo akaritora "bhuku rake rakanakisa".
Iyo yekutanga novel yakaburitswa naGabo yakatopa zviratidzo zvevanyori, mamiriro uye dhorobha reMacondo iro raizozivikanwa mushure mekuburitswa kweMamwe Makore Mazana eSolitude. Nhoroondo ipfupi inopindirana maonero matatu emhuri (iya yababa colonel, mwanasikana wavo uye muzukuru wake) maererano nekuvigwa kwemurume aivengwa nevanhu vese. Mune basa iri, Gabo anoto ratidza kare kusvetuka kwenguva yake uye zvimwe zvinhu zvemashiripiti kuita kuti ive nhanho yekutanga kune ese mabhuku ebhaibheri.
Nyaya yekurasa ...
Basa remunyori rakanyanya kutapa nhau rakauya mushure memwedzi yekuferefetwa chiitiko chakashamisa chakashamisa vese veColombia. Luis Alejandro Velasco Akatanga kubva kuMobile, Alabama (United States), paCaldas ngarava, iyo yakaparara, ichimumanikidza kuti apedze mazuva gumi ari mugungwa asina chikafu uye nekunzwira tsitsi kwekuverenga kwekukanda pamusoro pekuti ndege dzekununura dzaizosvika riini. Iyo nyaya yakafumura kutengeserana kwekutengesa pakati penyika mbiri, achipa mhosva yekukanganwa gamba reColombia iro rine nyaya rakashandurwa kuita runyorwa naGabo muna 1970.
Mumatsutso a Patriarch ...
Chimiro chemudzvanyiriri muLatin America chave chinyorwa chinyorwa chakamutswa sevamwe vashoma naGabo mubhuku iri. Yakafungidzirwa senhoroondo yeprose, mune akawanda manzwi-emunhu manzwi achipindirana semaonero eanodzvinyirira Patriarch, bhuku iri rakaburitswa muna 1975 uye sezviri pachena harina kufarira zvakawanda kuna Fidel Castro, shamwari yepedyo yaGabo.
Ndangariro dzehure hwangu hunosuruvarisa
Ndangariro dzehure dzangu ...
Iyo yekupedzisira bhuku naGabriel García Márquez, rakabudiswa muna 2004, zvakakonzera kumwe kukakavara mushure menguva yekuburitswa kwayakapiwa zano raakapa: nyaya yerudo pakati pemutori wenhau akwegura uyo anosarudza kuzvipa sechipo chegumi nemana chekuzvarwa husiku hwechishuwo nevechidiki-vechidiki vanofunga kutengesa humhandara hwake kununura mhuri yake. Kushungurudzwa kwesimba, kusurukirwa uye kufa, mitatu yenyaya dzaGabo dzaanofarira, dzinobatanidzwa munyaya iyi yakaiswa muguta reBarranquilla pakati pezana ramakore rechimakumi maviri uye ane mafirimu akashandurwa akaona mwenje muna90.
Gumi nembiri Pilgrim Tales
Gabo aive munyori mukuru wenhau asi, pamusoro pezvose, munyori wenhau pfupi, hunhu hwevanyori vazhinji veLatin American mashiripiti echokwadi. Uye mumwe wemienzaniso yakanakisa ndiko kuunganidzwa kwenyaya gumi nembiri dzinotaura nyaya dzevanhu vakasiyana veLatin America munharaunda yeEurope: kubva kumutungamiriri wekare akatapwa kuenda kuGerman governess uyo anochengeta vana vevaviri veColombia, iyi pfupi nyaya anthology inoputika mune iri nyaya yangu yandinodisisa nemunyori weColombia, Nzira yako yeropa muchando, ane magumo anoparadza anotsanangudza chinodikanwa chinodiwa mumhando senge nyaya pfupi.
Rarama kutaura ...
Mushure mekufa kwaGabo, nyika yakatendeukira kubasa iri nekushingairira kukuru, nhoroondo yehupenyu hwemunyori yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu uye zvakabatsira kunzwisisa zvirinani zvinyorwa zvake zvirinani. Mumapeji aro ese, Gabriel García Márquez anotaura nezvenyaya dzaakaudzwa naambuya vake, nezve nzira yake kune hutsinye hukuru hwehurumende yeUS muLatin America kana chikumbiro chekuroora mukadzi wake, Mercedes Barcha, rudo rwehupenyu hwake. Iri bhuku rakaburitswa muna 2002.
Ndeapi, mune ako maonero, iwo gumi akanakisa mabhuku pa Gabriel García Márquez ?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 10 akanakisa mabhuku naGabriel García Márquez
Victor Linares. akadaro
Zvese zvinyorwa zvekunyora zvaGabo zvinogona kupfupikiswa muNobel Prize yaakakunda. Zvisinei, Mabasa maviri anosangana nezvinotarisirwa: Makore Makore Ekusurukirwa. »Rudo muNguva dzeCholera»
Pindura Victor Linares.
Ndinoda iyo yakasikwa yekunyora kweGGM, ndinoshuva kuti dai yakave yekusingaperi kuitira kuti ndirege kumira kunyora uye ndikwanise kunakidzwa nayo panguva yega yega nechinhu chitsva
Pindura kuna Gleidys